Warshadaha Naadiga Golf-ka Xirfadleyda ah, Iibka Naadiyada Goolaleyda Jumladlaha ah, Adeegga Goobbada Goolafka Customka | Jasde
Bir golf ah
OEM / ODM SERVICE loogu talagalay madaxyada golf-ka, xirmooyinka golf-ka golf-ka ee la dhigay
20+ Sano SOO SAARIDII GOLF
OEM Adeeg loogu talagalay Golf Set, Madaxa Golf iyo qalabka kale ee Golf
Maaddaama ay tahay warshad golf golf xirfadlayaal ah oo leh 20 + sano oo waayo-aragnimo ah, Jasde waxay bixisaa naadiyo jumlo jumlo ah iyo noocyo golf caadiya oo lagu qiimeeyo qiimaha warshad. Jasde wuxuu halkaan u joogaa inuu keeno kooxaha ugu fiican ee naadiyada golf-ka, oo lagu soo bandhigay hawlgal fudud, tayo sare leh, tayo aad u qurux badan.
Kusoo dhawow si aad u hubiso alaabada hoosta ku taal oo aad u hesho faahfaahin ku saabsan alaabada naadiga golf ee Jasde.
Qaabka loo yaqaan 'Ranbow Roinbow Wood'
Darawalka 'Ranbow' 2pc Premium Planium Darawalka tithium laba miisaan yar oo CG ah oo hooseysa oo loo dhisay xawaare badan. Guryaha gacan ka geysta sameynta mugga ugu xasilloonida iyo cagaarka ee ugu dambaysa - tirada ugu badan ee ay u oggol tahay USGA si ay u muujiso kalsoonida.Jasde-ka loo habeeyay roobaadka roobaadka roobka ah ee loo dejiyey soosaarayaasha inchina, 100% waa muhiim
Loogu talagalay Soo-saareyaasha Guud ee CNC ee loo yaqaan 'Putter'
Xenos taxanaha taxanaha ah wuxuu sameeyaa muuqaal ah qaab dhismeedka loo filayo. Saxanka kaliya ee la galiyay xaashida aluminiumka ee iftiinka oo dhalida culeyska madaxa madaxa oo dhan naqshaddani waxay ka dhigaysaa qaabka weyn ee qaab-dhismeedka si aad u xasilanto. Naqshadeynta qabow ee dabacsan dabacsan. 4Waxaan ku jirnaa saxanka kaliya ee saxanka ah ayaa la beddeli karaa wax lagu kulmo miisaanka madaxa luuqadiisa oo kala duwan. Ikhtiyaarada caadada ah waxaa ka mid ah: midabka madaxa, astaanta, qabsashada, iyo dhererka.Jasde waxay u habeysay soosaarayaasha khaaska ah ee CNC ee la soo saaray
Birta Weyn # 7 KELIYA LENG TRIC MENGE CUSUB ILMAALKA KELIYA EE MARKII MADAXWEYNE-Jasde golf
Kaliya hal golf golf bir ah oo go'an Waxay ka dhigeysaa inay fududeeyaan inay ku dhuftaan, oo aad u cafiyaan oo is-dhigto oo isku mid ah oo isku mid ah tallaal kasta waxay abuurtaa masaafo joogto ah oo u dhexeeya naadiyadaJasde Wholesale Iron Iron 7 keli ah oo leh khayaano-jasde, 100% oo ah arrimo masuuliyadeed oo tayo leh
CNC CNC MINC MINC CNC CLASS PLESS PLENGO GOLL OO KU SAABSAN ISTICMAALO CODKA GOLD MENGES GOLD MOSDO Golf
Classic, dhameystirka Polish-ka sarreeya iyo qaabka dheelitirka caadiga ahIkhtiyaaraadka midabka: madow, dahab, dahab ah, buluug, qaansoroobaad ...Golf kaamil ah oo lagu dhajinayo kubad kuu dhaw PINCNC MINEGED MEND: Loogu talagalay lafdhabarta weyn, xakamaynta iyo ka dhammaanJasdde Wolesesale Plation Plation Golf oo kala duwan oo golf ah oo leh Jasde-jasde, 6500 mitir oo labajibbaarane ah oo ah warshadda naadiga golfbuuqaIkhtiyaarada caadiga ah waxaa ka mid ah: midabka madaxa, wajiga xajisi, astaanta, xajiska, iyo dhererka.
Annagu kaliya ma nihin warshad golayaal loogu talagalay naadiyada golf-yada jumlada ah, noocyada golf-yada loo bixiyo, waxaan sidoo kale nahay saaxiib ganacsi oo wanaagsan, Jasde waxaad haysataa xulashooyin aad ku iibsan karto alaabada golf-ka iyo adeegyo laguu fidinayo oo aadan meel kale ka heli karin.
Taasi waa - Waxaan bixinaa kaliya GOLF, laakiin sidoo kale ADEEG!
1. Wadayaasha titanium-ka waxqabadka sare leh
2. Qiimaha lagu tartamo ee kaynta iyo burooyinka la been abuuray
3. Xoog R
& D karti
4. Qalab casri ah
Waxaan ku siin karnaa alaab tayo sare leh iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha kala duwan. Jasde team service professional waxay halkan u joogtaa inay hirgasho baahiyahaaga naadiyada golf-ka ee lowska iyo bolts Ku soo dhowow inaad nala soo xiriirto haddii aad xiiseyneyso adeegga Jasde.
Intro oo ku socota tusaalaha caamka ah ee caamka ah
Waxaan u fidinaa OEM, oo macaamiisha u adeega macaamiisha adduunka oo dhan laga bilaabo golf dhameystiran, darawalada, kaynta, bir-qaadka, baararka, googooyaha, billadaha, garka iyo kuwa kale.Intro oo ku socota isku-dhafka golf-jasde golf-ka
Gudaha JASDE, waxaad leedahay ikhtiyaarrada ah inaad iibsato alaab iyo in lagu siiyo adeegyo aadan meel kale ka heli karin.
Xiamen Jasde Sports waa warshad golf golf xirfad leh oo leh in kabadan 20years khibrad madax golf, naadiyada golf, xirmooyinka xirmooyinka golf sameynta iyo soosaarida dhamaan noocyada qalabka golf. Shirkaddayadu waxay ku taal Xiamen, Koonfurta Shiinaha. Waxaan u fidineynaa macaamiisha adduunka oo idil OEM, adeegga ODM iyo sidoo kale sumadeena (Koala, Mazel). Wadayaasha Golf, kaynta, birta, qoryaha, xajmiga, jibbaarada dhammaantood waa la habeyn karaa.